lundi, 01 août 2016 17:47
Sary Sobika Fenoarivo Atsinanana
Fenoarivo Atsinana: Zaikaben'ny Diakona sy ny Loholona
Zaikaben'ny Diakona sy ny Loholona avy amin'ny Fiangonana FJKM, avy amin’ny synodam-paritany 12, tao Fenoarivo Atsinanana, an-tsary.
Fora zaza Faobe
lundi, 01 août 2016 17:21
Mahajanga : Fora zaza miisa 500
Ny députée Rahantanirina Lalao fantatra amin'ny hoe, Nina lany taty Mahajanga amin'ny anaran'ny Mapar dia nanatontosa ezaka sosialy famorana zaza faobe tamin'ny asabotsy lasa teo, izay efa fanaondry zareo isan-taona.Tamin'ity taona ity dia zaza miisa 500 no natao famorana maimaimpona izay ezaka natolotry ny députée Nina tamin'ny anaran'i Filoha Andry Rajoelina. Maro ireo solotena isam-paritra nanotrona izao ezaka izao, ary tonga taty an-toerana ihany koa ny solotenan'ny birao foibe. Tsy mijanona eto moa izao ezaka sosialy ataon'i Filoha Andry Rajoelina izao fa maro ireo fanatanterahina ny vinan'asa efa mipetraka amin'izao. Tonga tety ihany koa ny Ben'ny Tanàna Mokhtar Andriatomanga izay Mapar rahateo.
lundi, 01 août 2016 16:44
Varotra sy ny Fanjifana : Hanara-maso ireo tobin’entana ny Ministera
Hanao hetsika fanaraha-maso ireo tobin’entana sy toeram-pivarotana amin’izay mety ho fanafenana ireo entana ireo ka mitarika ny fisondrotan’ny vidiny ny Ministeran’ny Varotra sy ny Fanjifana manoloana ny fiakaran’ny vidin’entana sasantsasany tato ho ato, indrindra fa eo amin’ny entana ilain’ny andavan’andron’ny mponina, toy ny arina fandrehitra. Ho fandaminana ny tsena anatiny sy ho fiarovana lalandava ny mpanjifa no antony, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny ministera.
lundi, 01 août 2016 16:35
Bacc: Misakafo eny an-toerana ireo mpiadina
Eo ny halaviran'ny toeram-podiana, ny saran-dalana, ny fatahorana sao tara, dia maro ny misafidy mivatsy sakafo, na anateran'ny Ray aman-dreny sakafo ka dia eny an-toerana ihany no misakafo, sady maka sasatra kely, no efa miomana amin'ny taranja manaraka.
lundi, 01 août 2016 16:04
Ambalavao Isotry: Nahitana faty olona
Lehilahy iray tokony ho eo amin'ny 50 taona eo no hita faty teny amin'ny lakan-dranon'andriantany izay mandalo etsy amin'ny Manarintsoa Isotry. Fantatra fa olona mipetraka eny an-toerana ihany izy io, tsy fantatra mazava izao niavian'izao fahafatesana izao fa dia fantatra fa efa tamin'ny alina no nilona tao anaty rano ito olona ito. Araka ny filazan'ny mpitandro ny filaminana izay nanao ny fanadiadiana moa dia noho ny filonana tao anaty rano maharitra no nahatonga ny fivohahan'ny ra teo amin'ny sofiny, nahitana vola ihany koa moa teny aminy.
lundi, 01 août 2016 15:40
Nanomboka anio ny fanadinana ho an'ny fampianarana ankapobeny.
lundi, 01 août 2016 15:07
Tolagnaro : Nilamina ny fanombohan'ny fanadinana bakalorea
Ny kolejy Sacré Coeur, an-dry frera sy ny kolejy Saint Vincent de Paul, an-dry masera no nampiantrano ny fanadinana an-tsoratra bakalorea aty Tolagnaro. Nilamina ny fanombohana androany. Nafindra any amin'ireo sekoly katolika roa ireo ny fanadinana noho ny asa fanamboarana atao ao amin’ny Lycée Pôle, handraisana ny “sport scolaire” ny 20 ka hatram'ny 28 Aogositra izao. Misy mpiadina voasoratra anarana 1.280 aty Tolagnaro, ka 70 ao amin’ny sokajy A1, 1.030 sokajy A2, 17 sokajy C, 163 sokajy D. Miisa 97 kosa ireo kandida fampianarana teknika.14 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpiadina aty Tolagnaro, 55 taona kosa ny zokiny indrindra.
dimanche, 31 juillet 2016 17:25
Faliarivo : Tonga ny Jirama
Isaorana ny PCA Jirama Mohamed Rachid, izay nandray andraikitra mivantana tamin'ny famahana ny olana amin'ny andrinjoro nianjery teto Faliarivo kaominina Ambavahaditokana Itaosy.
samedi, 30 juillet 2016 11:28
Sary nindramina fampihaingoana
Morombe : Lehilahy tra-tehaka teo am-panolanana zaza 6 taona, saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Mbola teo ambodiomby mihitsy nanolana an’ity voatavo tsy mifandraka ilay mpanolana no tratra, ka niharan’ny fitsaram-bahoaka avy eo, ary naratra mafin’ny daroka sy vono saika maty mihitsy. Ilay zaza kosa simba tanteraka tamin’ny fizahana tsy maintsy natao taminy. Tovolahy iray manodidina ny 30 taona no tra-tehaka teo am-panolanana zazakely vao enin-taona monja, ny alarobia teo, tany Morombe, avaratry Toliara. Saika matin’ny hatezeram-bahoaka ity lehilahy ity. Raha ny vaovao voaray dia mpiray tanàna ihany izy ireo, ka rehefa variana nanao ny kenonkenona tao an-tranony ny renin’ilay zaza, dia mody notambatambazan’ity tovolahy ity ilay zaza, ka noentiny nandeha tany amin’ny toerana mangina ilay tsy manantsiny, ary nanamparany ny filan-dratsiny sady notampenany ny vavany ary notereny tsy hitomany ity niharan-doza. Rehefa tsy nahatazana ny zanany izay nilalao teo an-tokontany ny renin’ilay zaza dia nikaroka niaraka tamin’ny fianakaviany eran’ny tanàna ilay menaky ny ainy, hoy hatrany ny vaovao voaray.
vendredi, 29 juillet 2016 16:30
Sary Sobika Sambava
Sambava : Delestazy koa
Manomboka sahady koa ny delestazy eto Sambava, tamin’ity herinandro ity izay miteraka fatiantoka ho an’ny mpanjifa indrindra izay miankina amin’ny herinaratra vokarin’ny Jirama. Tapaka isan’andro ao anatin’ny adiny valo be izao ny jiro eto Sambava. Raha ny fanazavana azo avy tamin’ny Chef sous-Groupement Jirama Sambava, Risy Honoré moa dia noho ny tsy fahampian’ny solika no anton’izao delestazy izao ary mbola tsy voavaliny kosa ny hoe hatramin’ny oviana ?
Page 365 sur 435